Road to Freedom: 2/1/10 - 3/1/10
(မိမဆုံးမဖမဆုံးမသား သန်းရွေမြေးချာတိတ်အကြောင်းသတင်းတွေ မကြာမကြာကြားရတတ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါ အီးမေလ်းထဲဝင်လာတဲ့ သတင်းနှစ်ပုဒ်ကတော့ ရိုင်းစိုင်းကြမ်းတမ်းတဲ့ အဆင်အသွေးမျိုးစုံ ပေါင်းစပ်ယှက်ဖွဲ့ထားသလို ခံစားရတာမို့ အမှတ်တရအဖြစ် ဘလော့မှာ မှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါတယ်။ ရေးသူအမည်တော့မပါ၊ မူရင်းအတိုင်းပါ။ ၇ ရက်သားသမီးများ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ငြိမ်းချမ်းပြီး ရန်သူမျိုးငါးပါးဘေးမှ အမြန်ဆုံး ကင်းဝေးကြပါစေ။ ငြိမ်းချမ်းအောင်)
နေရွှေသွေးအောင် (ခ) ဖိုးလပြည့်နဲ့တွဲပြီး မည်သူ့ ကိုမျှ ဂရုမစိုက်ဘဲ နှစ်ယောက်ပေါင်းကာ ထင်ရာစိုင်းနေသောသူ တစ်ဦးမှာ ဆေးဝန်ထမ်း ညွှန်ချူပ် ဗိုလ်ချူပ် သန်းအောင်ရဲ့သမက်ဖြစ်သူ ချိုလေးဆိုသူ ဖြစ်ပါတယ်၊၊
နေရွှေသွေးအောင်နဲ့ချိုလေးတို့ ဟာ သန်းရွှေရဲ့ အရှိန်အ၀ါ၊ မိဘဖြစ်သူတွေရဲ့အရှိန်အ၀ါကို သုံးပြီး မြန်မာပြည်မှာ သောင်းကျန်းဆိုးရွားနေသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ချိုလေးဟာ နေရွှေသွေးအောင်ကို အမှီပြုပြီး သူလုပ်ချင်တာတွေကို လုပ်ချင်သလို လုပ်ပါတယ်။ သူနဲ့ အတူ နေရွှေသွေးအောင်ကလည်း တွဲချက်ညီညီ ထင်ရာစိုင်းပါတယ်။ချိုလေးဟာ လိုင်စင်မဲ့ကားတွေကို လိုင်စင်ရအောင်လုပ်ဖို့ အတွက် နေရွှေသွေးအောင်ကို အသုံးချပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်လို့ ရတဲ့အတွက် နေရွှေသွေးအောင်ကိုလည်း ကဲချင်တိုင်းကဲဖို့ အတွက် အတူတူ သွားလာကြပါတယ်။ သူတို့ နှစ်ယောက် အတူတူ တစ်တွဲတွဲ သွားလာတဲ့အခါမှာ မော်ဒယ်ဂဲလ် (Model Girls) တွေနဲ့ချိန်းချက်ပြီး သွားလာကြတယ်။ သူတို့ သွားတဲ့ ကားတွေပေါါ်မှာလည်း အချက်ပြမီးလုံးကို ကားပေါ်တင်ပြီး အထူးကား (VIP car) အနေနဲ့ သိသာအောင် ပြပြီး ကြွားဝါ လုပ်ပြလေ့ ရှိကြောင်းကိုလည်း သိရှိရပါတယ်။ ဒီလို ချိုလေးရဲ့ကပ်ဖားပြီး ပေါင်းသင်းမှုကို နေရွှေသွေားအောင်ကလည်း နဂိုကမှ သန်းရွှေရဲ့မြေးဆိုပြီး ထင်ရာစိုင်းနေသူပီပီ အနှစ်ခြိုက်ကြီး ကြိုက်နှစ်သက်ကာ ကဲချင်တိုင်း ကဲနေပါတယ်။နေရွှေသွေးအောင်နဲ့ချိုလေးတို့ညတိုင်းနီးပါး သွားရောက်လေ့ရှိတာကတော့ မြရိပ်ညို ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ နှစ်ဦးသွားတဲ့အခါတိုင်း သူတို့ နဲ့ချိန်းချက်ထားတဲ့ မော်ဒယ်ဂဲလ်တစ်ချို့ ပါ ပါရှိပါတယ်။ နေရွှေသွေးအောင်၊ ချိုလေးတို့ နဲ့ အတူ အပေါင်းအပါတွေကတော့ ဒဂုံအင်တာနေရှင်နယ် ကုမ္ပဏီအုပ်စုပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ ၀င်းအောင်ရဲ့ သားရယ်၊ နအဖ၀န်ကြီး စိုးသာရဲ့ သား အောင်စိုးသာတို့ ပါ ပါပါတယ်။ကဲချင်တိုင်းကဲကြတဲ့အခါမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲတာတွေ မိန်ကလေးတွေနဲ့အတူအိပ်တာတွေ လုပ်ကြပါတယ်။ သူတို့ က အစပြုပြီး အနှိပ်ခန်းတွေကို သွား၊ ကလပ်တွေကိုသွားပြီး သောင်းကျန်းတာမို့နောက်ဆုံး ဒီအနှိပ်ခန်းတွေ ကလပ်တွေ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလာပြီး မသိနားမလည်တဲ့ အသက်အရွယ် မပြည့်သေးသူလေးတွေပါ သွားရောက်တာတွေ ဖြစ်လာကာ လူသိရှင်ကြားဖြစ်လာလို့တစ်လောကမှသာ နေ့ ခင်းဖွင့်တဲ့ ဒေးကလပ် (Day Club) တွေ ပိတ်ပြလိုက်တာ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တိတ်တိတ်ပုံး ရှိနေသေးတဲ့ နေရွှေသွေးအောင်တို့ လို ပျက်စီးချင်တိုင်းပျက်စီး ထင်ရာစိုင်းချင်တိုင်း ထင်ရာစိုင်းနေတဲ့ အပေါင်းအပါ လူငယ်တွေ ဆုံတွေ့ ရာ နေရာတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒီနေရာတွေမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲပြီး မိန်းကလေးများနဲ့ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်နေတာတွေ ရှိနေပါတယ်။ နေရွှေသွေးအောင်တို့အုပ်စုရဲ့ အတွင်းမှာဘဲ အချင်းချင်း ဂွင်လုကြလို့နောက်ဆုံး နေရွှေသွေးအောင်ရဲ့ယုတ်မာတဲ့ စနက်ကြောင့် တင်အောင်မြင့်ဦးရဲ့သားဖြစ်သူ (ဗိုလ်ကြီးဟောင်း) နိုင်လင်းဦး (တေဇာစောဦး) ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ရန်ကုန် ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်းမပေါ်ရှိ အနုပညာ ဦးစီးဌာနပိုင် မြေနေရာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ “7 Lekker” ကဖေးဆိုင် ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတာပါဘဲ။ နိုင်ငံတော်မြေနေရာကွက်ပေါ်မှာ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်လို့ ရမလားဆိုပြီး မသိတဲ့သူတွေ အထင်ကြီးရအောင် အကြောင်းပြချက်နဲ့နေရွှေသွေးအောင်က ပြောဆိုဖျက်ဆီးပြလိုက်ပေမယ့် တကယ်တော့ နေရွှေသွေးအောင်ရဲ့အချင်းချင်းအပေါ် ကောက်ကျစ်ယုတ်မာမှုဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို အတွင်းသိ အစင်းသိကြသူတွေက သိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် သန်းရွှေ သေရင် နေရွှေသွေးအောင်တော့ သတိသာထားပေတော့လို့ကြိမ်းဝါးနေကြပါတယ်။ ထို့ အတူ စစ်တပ်အတွင်းက ဗိုလ်ချူပ် အတော်များများဟာလည်း နေရွှေသွေးအောင်ကို မကျေမနပ်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နေရွှေသွေးအောင်ကနေ နိုင်လင်းဦးရဲ့ကဖေးဆိုင်ကို ဖျက်ပြစ်လိုက်တဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းကတော့ နေရွှေသွေးအောင်က အဲ့ဒီနေရာမှာ သူတို့ အပေါင်းအပါတွေ ကဲလို့ ရအောင် သီးသန့် ကလပ် (VIP club) တစ်ခုလုပ်ချင်လို့ပြောဆိုရာကနေ ပြဿနာ စဖြစ်တာပါဘဲ။ ဒါကို နိုင်လင်းဦးက လက်မခံတဲ့ အတွက် နေရွှေသွေးအောင်က ချိုလေးရဲ့မြှောက်ပင့်မှု၊ ကဖေးဆိုင် အစုရှယ်ယာပါတဲ့ အောင်စိုးသာရဲ့ဘက်လိုက်မှုတွေကြောင့် ဒီလို အချင်းချင်း ဆော်ထည့်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုး နေရွေသွေးအောင်ကို အနီးကပ် မြှောက်ပင့်သွေးထိုးနေသူ ချိုလေးနဲ့နဂိုကမှ ဘယ်သူကိုမှ ဗိုလ်မထားချင်တဲ့ နေရွှေသွေးအောင်တို့ရဲ့စနက်ဖြစ်ပါတယ်။ချိုလေးဟာ နေရွှေသွေးအောင်ကို မျောက်ပြဆန်တောင်းသလို လုပ်ပြီး စီးပွားရေးသောင်းကျန်းလာလို့မသမာသော ငွေကြေးများနဲ့ပြည့်စုံလာနေပါတယ်။ ချိုလေးဟာ အရပ် (၆) ပေ (၁) လက်မခန့် ရှိပြီး ကိုယ်ပေါ်မှာ ဆေးမှင်ကြောင်တွေ ထိုးထားပါတယ်။ သူ့ မှာ ဆရာဝန်မတစ်ဦးနဲ့အိမ်ထောင်ကျပြီး သမီး နှစ်ယောက်ရှိပေမယ့် သမီးချင်း နှမချင်း မစာနာဘဲ မိန်းကလေးတွေကို နေရွှေသွေးအောင်နဲ့ပေါင်းပြီး ဖျက်ဆီးသောင်းကျန်းနေသူ ဖြစ်ပါတယ်၊၊နေရွှေသွေးအောင်ရယ် ချိုလေးရယ် အောင်စိုးသာတို့ ရယ်ဟာ ဂိုဏ်းအုပ်စုဖွဲ့ ထားပြီး ဂိုဏ်းအုပ်စုနာမည်ကို “ဆင်စွယ်” လို့သတ်မှတ်ထားကြောင်းနဲ့သူတို့ သွားလာသောင်းကျန်းတဲ့ နေရာတွေမှာ ဒီနာမည်ကို အသုံးပြုကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ယခင် မဆလတစ်ပါတီ အာဏာရှင်နေ၀င်းရဲ့မြေးတွေ သောင်းကျန်းပြီး ဂိုဏ်းဖွဲ့ ထားတဲ့ စကော်ပီယံ “Scorpion” ဂိုဏ်းထက် ပိုဆိုးတဲ့ သန်းရွှေရဲ့ မြေး နေရွှေသွေးအောင်ရဲ့ဂိုဏ်းအုပ်စုကြောင့် သူတို့ အချင်းချင်း ဇတ်တူသားစား ဆော်ကြနှက်ကြတာအပြင် သူတို့ ရဲ့အစပြုလုပ်ရပ်များကြောင့် အခြားသော မသိ နားမလည်သည့် အချို့ သော လူငယ်လူရွယ် ယောင်္ကျာလေး မိန်းကလေးများပါ ပျက်စီးမှု လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ရှိနေတာ တွေ့ ရှိနေရပါတယ်။တင်အောင်မြင့်ဦးရဲ့သား နိုင်လင်းဦးကို နေရွှေသွေးအောင် လူကြားကောင်းအောင် ပြောခဲ့တဲ့ “နိုင်ငံတော်မြေနေရာကွက်ပေါ်မှာ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်လို့ ရမလား” ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း ပြောကြေးဆိုရင် “ပြည်သူတွေ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ မြန်မာပြည်မြေပေါ်မှာ ဒီလို ထင်ရာစိုင်းလို့ရသလား” ဆိုတာပါ။
ပြည်သူချစ်တဲ့အနုပညာရှင် တစ်ယောက် ရေတိမ်နစ်တော့မှာ တွေးပူနေမိတယ်။ လိုချင်ရမ္မက်ကြီးပြီး စိတ်ဓါတ်အဆင့်တန်းနိမ့်လွန်းလှတဲ့ သန်းရွှေတို့မိသားစုဟာသူတို့မနာလိုတဲ့လူတွေ ပေါ်မှာ အောက်လမ်းနည်းတွေ သုးံပြီးအနိုင်ယူလေ့ရှိတာကြောင့်ပါ။ ခုတစ်ခါတော့ စိုင်းစိုင်းအလှည့် ရောက်လို့ပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တချို့ ပြန်ကြည့်ကြည့်ရအောင်။
၁. ကွယ်လွန်သူ အတွင်းရေးမှုး ၂ ဟောင်းတင်ဦးရဲ့သား၊ မြို့တော်ဝန်ဟောင်း ဦးကိုလေးရဲ့သမက်ဟာ ဘိုးတော် ၏ သမီး ၀က်ပုပ်မ..သန္တာရွှေကို အပျော်ကြံတယ်လို့ တစ်ဖက်သပ်စွပ်စွဲပြီးကားနဲ့တိုက်သတ်ခဲ့ ပြီး မတော်တစ်ဆမှုပါ လို့အကြောင်းပြခဲ့တယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ အသက်မဆုးံရှုးံခဲ့ရပေမယ့် အဖြစ်မှန် ကို ရေလုံနှုတ်ပိတ်ပြီး နိုင်ငံခြားရေးရုးံမှလည်း အလုပ်ဖြုတ်ခံရကာ ဒုက္ခိတဘဝနဲ့ အရိုးထုပ်နေရပါတယ်။
၂. စိမ်းလဲ့ကန်သာ၅လောင်းပြိုင်လူသတ်မှု ယနေ့ထိမဖော်ထုတ်နိုင်သေးပါဘူး။ သန္တာရွှေ ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲ အတွက် မိုးကုပ်မြမောင် မိသားစုသာလျှင် ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဖိတ်ဖိတ်တောက် စိန်တွေ ဌား။ အရှက်မရှိ သူ့ ဟာလိုကြွား လောဘတက် ပြန်မပေးချင်တော့ မိသားစုတစ်စုလုံး အသေသတ်ပြီး.သတင်းအမှောင်ချပြီးတော့ မီဒီယာတွေ မေ့ပျောက် သွားအောင် လှည့်စားနေပါတယ်။ အမေရိကန်သံရုးံက CCTV မှတ်တမ်းခွေပေးခဲ့တော့ ဗိုလ်ချုပ် မောင်ဘို ကိုယ်တိုင်ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးရုးံမှာ လာသိမ်းသွားခဲ့ပါသတဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒီအိမ်ထဲကို နောက်ဆုးံ ဝင်သွားတဲ့ ပါရာဒိုအနက်ရောင်ကားဟာ ကြိုင်သန်းရွှေရဲ့ကားဖြစ်နေလို့ပါတဲ့။
သာမန်လူတမ်းစားတွေဒီလိုရာဇဝတ်မှုမျိုးကျုးလွန်ချင်ပါတယ် ဆိုရင်တောင် ကျုးလွန်နိုင်လောက်တဲ့ လက်နက်အင်အားမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ရဲမြင့်သား အောင်ဇော်ရဲမြင့် ကို စိတ်ကြွဆေးပြားတွေ ထုတ်လုပ် တာမိတော့ တရားရုးံတင်ဖို့နေနေသာ သာဖမ်း တောင်မဖမ်းရဲပါဘူး။ ဆေးသမားက သူတို့ထက်ကြမ်းတယ် ဖမ်းရဲဖမ်းကြည့် ၅ လောင်းပြိုင်ကိစ္စဖော်လိုက်မယ် ဆိုတာနဲ့သန်းရွှေကြီး အမြှီးကုပ်သွားရပါတယ်တဲ့။
၃. မေ ၃၀ ဒီပဲယင်းလူသတ်ပွဲကြီးကတော့ ကမ္ဘာသိမို့အထူးမပြောတော့ပါဘူး။ပုဂ္ဂိုလ် ရေးမနာလိုစိတ်ရယ် မိသားစု ကောင်းစားရေး အတွက် သန်းရွှေခြေကုန်ထုတ်ရမ်းခဲ့တဲ့ ရာဇ၀တ် ပွဲပါ။
၄. မကြာခင်ကမှဖြစ်သွားတဲ့နောက်တစ်ခုကတော့7CORNER ဆိုတဲ့အတွင်းရေး မှုး ၁ တင်အောင်မြင့်ဦးသား နဲ့ စီမံကိန်းဝန်ကြီးစိုးသာ သာ တို့ပိုင်တဲ့ဆိုင် ကယိုးဒယားက စားဖိုမှုး၊ ကြိုးမဲ့အင်တာနက်တွေနဲ့ ရန်ကုန် လူငယ်တွေကြား ရေပန်းစားလာတော့စိန်မျောက်မျောက်က ဘူဒိုဇာနဲ့ထိုးပြီး ဖျက်ဆီးခိုင်းတဲ့ထိမ နာလိုစိတ်ပြင်း တဲ့ မိသားစုတွေပါ။ မြေးကမရင့်ကျက်သေးလို့လုပ်တယ် ဆိုရင်တောင် သေခါနီး အဘိုးနဲ့အဖွားက မဆုးံမကြဘူး လား။ မြေးတစ်ယောက်ကိုတောင်နိုင်အောင် မအုပ်ထိမ်းနိုင်တဲ့အဘိုးက ၅၅ သန်းရှိတဲ့တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်လို့ တိုင်းပြည်ပျက်တာ ဆန်းသလားဗျာ။
ခုလက်တလောစိန်မျောက်မျောက် အရူးရောဂါ နှာဘူးရောဂါ ထနေပြီး။နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာတောင်ဝင် စွက်လာပြီ။ နေမြင့်လေ အရူးရင့်ဆိုသလို။ အောက်ကသတင်းလေး ဖတ်ကြည့်ကြပါအုးံ။
မကြာခင်မှာ ဒီထက်တဆင့်တက်ပြီးမနာလိုစိတ်နဲ့ အကောက်ကျစ်ဆုးံအောက်လမ်း ပေါင်းစုံနဲ့ စိုင်းစိုင်းကို တိုက်ခိုက်တော့မယ် ဆိုတာ မြေကြီး လက်ခက်မလွဲပါဘဲ။ ဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ယုတ်မလဲရယ်။ ဘယ်တော့လည်း ဆိုတာကိုတော့ မကြာခင် အဖြေထွက်မှာပါ။
ဒီမိသားစုတစ်စုကြောင့် ၅၅ သန်းသော ပြည်သူတွေ မှီတင်းနေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ
အပြစ် မဲ့ပြည်သူ ဘယ်လောက် ဘဝတွေပျက်ခဲ့ရပြီလဲ၊
အပြစ်မဲ့ပြည်သူ ဘယ်လောက် အကျဉ်းကျခဲ့ကြပြီးပြီလဲ၊
ဒါကြောင့်နောက်ထပ်ပြည်သူချစ်တဲ့အနုပညာရှင် တစ်ယောက်အကြောင်းမဲ့ မဆုးံရလေအောင် စိုင်းစိုင်းရေ သတိထားပါ၊
Posted by Nyein Chan Aung at 1:08:00 AM 1 comments